विपत्तिले कसैलाई आपत्ति नदिओस् । यो सुचना सबैले सेयर गरेर सबै देशवासीलाई सचेत गराऊँ । - Taja Report
Homeसमाचारविपत्तिले कसैलाई आपत्ति नदिओस् । यो सुचना सबैले सेयर गरेर सबै देशवासीलाई सचेत गराऊँ ।
विपत्तिले कसैलाई आपत्ति नदिओस् । यो सुचना सबैले सेयर गरेर सबै देशवासीलाई सचेत गराऊँ ।
August 10, 2018 समाचार Comments Off on विपत्तिले कसैलाई आपत्ति नदिओस् । यो सुचना सबैले सेयर गरेर सबै देशवासीलाई सचेत गराऊँ ।
काठमाडौ । केहि दिन अलि कम पानी परिरहेको भएपनि आज साँझ देखि ठूलो वर्षा हुने मौसमविदहरुले अनुमान गरेका छन् । नेपालमा पानी पार्ने मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपाल भन्दा केही तल झरे पछि बुधबार र बिहीबार थोरै मात्रामा वर्षा भएको थियो ।
शुक्रबार त्यो रेखा फेरि नेपाल नजिकै पुग्ने भएकाले बेलुकी देखि ठूलो पानी पर्ने अनुमान गरिएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका मौसमविद समिर श्रेष्ठका अनुसार यसकै प्रभावले अहिले देशभरीकै मौसम बदली भई केहि ठाउँमा पानी परिरहेको छ ।
आज देशभरीकै मौसम सामान्यतया बदली भइ धेरै ठाउँमा पानी पर्ने अनुमान छ । पश्चिमको एकदुई ठाउँमा भने ठूलो पानी पर्न सक्ने उनले बताए । आइतबार सम्मै केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने संभावना रहेकाले सावधानी अपनाउन मौसमविद् श्रेष्ठले आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडाैँ । ललितपुर गोदामचौरका तीन युवा बाटो ढुकेका थिए । कार्यालयबाट साँझ घर जाँदै गरेकी युवतीलाई बलात्कार गर्ने योजना थियो । त्यसैले टाउकोमा ढुंगाले हानियो । युवती बेहोस भइन्, तीनैजनाले पालैपालो बलात्कार गरे । मुर्छित उनलाई बाटोमुनि तोरीबारीमा फालियो । याे घटना हाे- २ मंसिर ०७४ काे ।
युवतीकाे भोलिपल्ट उद्धार भयो, तर शिक्षण अस्पतालको आइसियूमा एक सातासम्म होस आएको थिएन । बोल्न सक्ने भएपछि उनले पीडकको नामै किटान गरेर उजुरी दिइन् । आरोपीहरू पक्राउ परे । तर अदालतले भने प्रमाण नपुगेकाे भन्दै कारबाही भएन । याे खबर अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा महिलालाई अदालत : आस न भरोसाशीर्षकमा छ ।
पीडितले आफूमाथि प्रहार गर्ने व्यक्तिले साथीलाई ‘रघु–रघु’ भनी बोलाएको र पछि मोबाइलको उज्यालोमा अनुहार पनि चिनेको दाबी गरेकी छिन् । अन्य व्यक्तिलाई समेत सामेल गराई चिन्न लगाउँदा पीडितले आरोपीको पहिचान गरेकी थिइन् । गोदामचौर ‘क’ संकेतका रूपमा पीडितले दर्ता गरेको यो मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतले भन्यो, ‘पीडितको ज्यान मार्ने प्रयास भएको छ, तर उनलाई लागेको घाउचोट आरोपीकै प्रहारले भएको हो भन्ने देखिँदैन ।’
‘गोदामचौर क’ अर्थात् पीडित युवती एक सातासम्म बेहोस थिइन्, उनी होसमा आएर मुद्दा दर्ता गरेपछि सुुनुवाइ सुरु हुन पनि समय लाग्यो । लामो समय अचेत भएका कारण पीडितको भनाइमा प्रश्न उठाई प्रहरीले परीक्षण गरेको थियो । उदाहरणका लागि पीडितले बयानका क्रममा आफू सातदोबाटोबाट घर फर्कने क्रममा हिमालयन बैंकको एटिएमबाट तीन हजार रुपैयाँ निकालेको बताएकी थिइन् । त्यस क्रममा अनुसन्धान गर्दा उनले बताएकै समयमा उक्त एटिएम मेसिनबाट ३ हजार रुपैयाँ नै निकालेको पुष्टि भएको थियो ।
तर, लामो अन्तरालपछि भएको पहिचान सत्य नहुन सक्छ भनेर इजलासले पीडित महिलाको दाबीमाथि नै प्रश्नचिह्न उठाउँदै न्यायाधीश बालमुकुन्द दवाडीको एकल इजलासले आरोपीलाई तारेखमा छोड्न आदेश दियो ।
हिउको पहाडमा रेलको यस्तो जोखिम पुर्ण यात्रा हेर्दा जो कोही को मुटु काप्छ (भिडीयो)
कम्तीमा पचास जनालाई शेयर गरि आफु पनि स्वास्थ्य वनौ र अरूलाई पनि स्वास्थ्य बन्न प्रेरित गरौ,… (252)
३ करोड नेपालीलाई खुशिको खबर : नेपाल विश्वकै सुन्दर देशको पहिलो स्थानमा, भारत सूचीमै परेन (फोटो फिचर) (97)
जग्गा नापमान सम्बन्धि अत्यन्तै महत्वपूर्ण जानकारी तपाईंलाई छ ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस (71)
न खान पर्छ न पीउन नै, यी दुई पातले जरैदेखि हटाउँछ सुगर (मधुमेह)!, तर कसरी ? थाहापाऊनुहोस् (56)